Ovao ny modem ip avy bash | Avy amin'ny Linux
Imbetsaka isika no maniry Mametraka rakitra avy amin'ny servidores izay manana fetran'ny fampidinana IP, ilainay manova IP hihoarana izany fetra izany.
Hasehoko ny fomba avereno ny modem avy amin'ny console ary avy eo ny fomba fanaovana a teny hampandeha automatique ny fizotrany.
Eny, amin'ny fampidirana azy dia holazaiko aminao fa ny ankamaroan'ny modem izay aroson'i Arnet any Arzantina dia manana mpizara telnet, noho izany dia hifandray eo izahay. Ny fizarana sasany dia tsy mametraka ny mpanjifan'ny telnet, koa tsy maintsy apetratsika izany. Momba an'i Debian sy ny derivatives:
sudo apt-mahazo mametraka telnet
Raha te-hifandray amin'ny modem izay ataontsika:
izay 10.0.0.2 no IP an'ny modem. Vantany vao vita izany dia hampiseho amintsika zavatra mitovy amin'ity manaraka ity ny console:
Izao dia tsy maintsy ampidirintsika ny solonanarana aloha sy ny teny miafina avy eo.
Ao amin'ny modem arnet ny angona fidirana dia:
Vantany vao miditra izahay dia mampiasa Vonjeo hahita ny lisitry ny baiko misy,
Ho hitantsika fa miverina miverina ny iray amin'ireo baiko. Avy eo hampiasa izahay reboot raha hanomboka io.
Ho an'ny script dia mila ireto programa manaraka ireto isika: lynx-cur, libnotify-bin.
Ao amin'ny Ubuntu:
sudo apt-mahazo mametraka lynx lynx-cur libnotify-bin
Manokatra mpamoaka lahatsoratra izahay.
Raha te hahalala raha nanova IP ny modem dia mila manamarina ny IP imasom-bahoaka isika alohan'ny sy aorian'ny famerenana ny modem. Izany no ataontsika:
IP = $ (lynx -dump http://cfaj.freeshell.org/ipaddr.cgi)
ary homenay anao ny 3 segondra ny fiandrasana ny valiny
avy eo hasehontsika ireo fampandrenesana amin'ny birao
mampandre-mandefa info info "IP tena izy" "$ IP"
Hifandray amin'ilay modem izahay izao.
Tsara ny manamarina ny hafainganan'ny valin'ny modem alohan'ny hidirana amin'ity ampahany ity
(torimaso 2; akon'ny "admin"; torimaso 2; akon'ny "alvlgeddl"; torimaso 2;
echo "reboot"; torimaso 65; akony "fivoahana") | telnet 10.0.0.2
aiza ny "torimaso 2" no fotoana ilain'ny modem hamaly sy ny "torimaso 65" ny ora tokony ho izy hamerenan'ilay fitaovana.
Zava-dehibe ny manombatombana ny fotoana famaliana amin'ny alàlan'ny fihoaram-pefy fa tsy amin'ny alàlan'ny toerana misy anao, satria raha tsy izany dia handefa baiko ny script alohan'ny hanaovan'ny modem azy ireo
Izahay izao dia manamarina ny IP ho an'ny daholobe indray:
IP_NEW = $ (lynx -dump http://cfaj.freeshell.org/ipaddr.cgi)
Miandry 3 segondra ny valiny izahay ary hijery raha tsy mitovy izy ireo:
raha ["$ IP"! = "$ IPNEW"]; avy eo (mampandre-mandefa info - "niova ny IP"
"$ IPNUEVO"); raha tsy izany; (mampandre-mandefa ny diy-fampitandremana "Tsy niova ny IP" "$ IPNEW"); ny fi
Izahay izao dia manampy ny shebang eo am-piandohan'ny antontan-taratasy, afa-tsy
"Restartip", omentsika alalana hanatanterahana izany ary adikao ao amin'ilay fampirimana
"/ Usr / bin".
chmod + x restart ip
sudo cp restart ip / usr / bin
Mba hanatanterahana azy dia tsy manoratra afa-tsy amin'ny «restartip» izahay
Amin'izany fomba izany no script:
Download Script y Download ny launcher
Ny mpandefa dia tokony hapetraka ao / usr / mizara / fampiharana /
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Hanova modem ip avy bash
Lahatsoratra tsara Mety ho an'ireo izay tsy manana IP raikitra.
Hahaha toy ny hoe samy manana Arnet daholo, ary ho an'ireo izay manana Speedy, Telecentro, Fiberporongatel, Claro, Telmex, sns ??? Diso ny tatitra nataonao
Franco Valledor dia hoy izy:
Ny script dia ho an'ny modem manokana, tsy maintsy manova ny baiko ho an'ireo ilainao ianao. Voalohany avy amin'ny console izay ataonao: telnet 10.0.0.2 (10.0.0.2 no ip an'ny modem amin'ny ankapobeny, raha tsy izany dia ovao amin'ny script izy). Avy eo dia manoratra ny mpampiasa ianao, amin'ny modem arnet dia admin ary avy eo ny teny miafina izay mety ho tomenague na alvlgeddl na hafa. Avy eo dia manoratra fanampiana ianao ary hanoro anao ny mety rehetra baiko, tsy maintsy misy ny antsoina hoe rebbot na manomboka indray. Ka ny zavatra tsy maintsy ovainao amin'ny script dia: modem ip, solonanarana ary teny miafina, baiko hamerina. Azo antoka fa ny olana dia tsy ilay teny miafina fa manandrana manova azy handray azy na hikaroka zavatra hafa amin'ny google ... Miarahaba anao
Valiny tamin'i Franco Valledor
kendy dia hoy izy:
Hey namana hitako fa mahaliana ilay lahatsoratra fa ny script kosa tsy mamerina ilay modem,
noho izany tsy miova ny ip, inona no hitranga?
Mamaly an'i kendy
Ampidiro ny kanelina amin'ny Debian Sid